ဖုန်း အားသွင်း ပြီး အိပ်ပျော်သွား သူတစ်ဦးရဲ့ တစ်သက် မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက် ..! - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဖုန်း အားသွင်း ပြီး အိပ်ပျော်သွား သူတစ်ဦးရဲ့ တစ်သက် မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက် ..!
ဖုန်း အားသွင်း ပြီး အိပ်ပျော်သွား သူတစ်ဦးရဲ့ တစ်သက် မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက် ..!
Apann Pyay 9:11 AM ဗဟုသုတအစုံ Edit
ယနေ့ခေတ် လူ တော်တော် များများ မှောင်မဲ နေတဲ့ အခန်းထဲ မီးရောင်ပျပျလေး မြင်နေရတဲ့ ဖုန်းဖန်သားပြင် ပေါ်ကို အာရုံစိုက်ရင်း အိပ်စက်ချိန် တွေကို မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဖုန်းအား က နည်းနေပြီဆိုရင် အားသွင်းကြိုး တပ်ပြီး ဖုန်းကိုဆက်သုံးပါသေးတယ်။ သုံးလို့ဝပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်း ကိုတစ်ညလုံး အားသွင်းထားပြီး အိပ်ရာဝင်ပါတော့တယ်။ ဒါဟာ လူတော်တော်များများ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့လိုပါပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံ အလာဘာမားပြည်နယ်သား Wiley Day ဆိုသူဟာလည်း ညစဉ်တိုင်း သူရဲ့ iPhone7ကို အားသွင်းကြိုးတပ်ပြီး အိပ်ရာမဝင်ခင်အထိ ဖုန်း ကိုတောက်လျှောက်အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ Day ဟာ သူရဲ့ဖုန်း ကို အားသွင်းရင်းသုံးနေရာကနေ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရာ သူ့လည်ပင်းရှိ ဆွဲကြိုးအရုပ်လေးက အားသွင်းထားတဲ့ ပလပ်ပေါက်တစ်ခုထဲကို ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆွဲကြိုးလေးဟာ အပူနဲ့လျှပ်စစ်ကို Day ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို သယ်ဆောင်လာခဲ့တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ကျင်တတ်သွားခဲ့သလို ဆွဲကြိုးဆွဲထားတဲ့ လည်ပင်းတစ်ခုလုံးမှာလည်း လွန်ပူနဲ့ထိုးထားသလို အပူလောင်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ Day အတွက်တော့ အတော်လေးကံကောင်းသွားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ သူရဲ့ အလျင်အမြန် သတိဝင်လိုက်မှုက သူ့ဘဝကို ကယ်တင်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Day အခုလို ဖြစ်သွားရတာဟာ ဖုန်း ကိုညလုံးပေါက် အားသွင်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သလို ဈေးပေါပေါဝယ်ယူထားတဲ့ Extension ကွိုင်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ကိုညဏ်စောင့်ဆိုတဲ့စကားကို မမေ့မလျှော့ပဲ အရာရာကို သတိထားပြုမှုကြဖို့ Day က အားလုံးကိုယ်စား အသိပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။